टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको फेरिदो मुहार: News Of Tokha
टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको फेरिदो मुहार
मंगल, सावन १७, २०७४
टोखा नगरपालिका २ वडा साविक चण्डेश्वरी गाविसमा रहेको टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा सुविधा तथा व्यवस्थापनमा अपत्यारिलो ढंगबाट सुधार भईरहेको छ । फाटफुट मात्र विरामीहरु आउने गरेको स्वास्थ्य केन्द्रमा बिगत १ वर्षा विरामीहरुको चाप अत्याधिक बढेको देखिन्छ । कारण स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नो सेवा तथा सुविधालाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र सन्तोषजनक बनाएकाले नै अहिले बिरामीहरु उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा जचाँउन आउने गरेका हुन । स्वास्थ्य केन्द्रले पुवाधार र आर्थिक अभावमा पनि सिमित स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी सेवाग्राहीहरुलाई सेवा दिदै आईरहको छ ।
टोखा चण्डेश्वरी स्वास्थ्य चौकीबाट बिक्रम संवत २०५४ श्रावण महिनाबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा स्तर उन्नती भएको थियो । विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार्रगर्दै आजको दिनसम्ममा आईपुग्दा स्वास्थ्य केन्द्रको मुहारनै परिवर्तन भएको छ । पहिला सिमित सेवा सुविधामात्र दिदै आईरहेको केन्द्रमा अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरको सम्पुर्ण सेवाहरु उपब्ध रहेकोप्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. रंधिर सागर यादव भन्नुहुन्छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं अन्तरगतका सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्था मध्ये धेरै बिरामीहरुलाई सेवा दिने मध्येमा यो स्वास्थ्य केन्द्र अग्र स्थानमा रहेको छ ।
सामान्य किसिमको चोटपटकको उपचार गर्न कठिन अवस्थाबाट अहिले माइनर प्रोसिजरहरु दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पुर्वाधारको कमिले सेवामा अलि ढिलाई भए पनि सेवाबाट कोहि पनि बञ्चित हुनु नपर्ने डा. यादव भन्नुहुन्छ । प्रति महिना यस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट १,०४८ जनाले सेवा लाभ दिईरहेको यस केन्द्रको तथ्यांक छ ।
यस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दमा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रको तुलनामा धेरै थप सुविधाहरु पनि उपलब्ध रहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यारत डाक्टरको अग्रसरतामा छाला रोग, रेविजको निःशुल्क सुर्इ, स्तन क्यानसर पहिचान स्वयम जाँच तालिकाको शिक्षा तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिचानको जाँच सेवा उपलब्ध छन् । त्यसका साथै इसीजी, एक्से सेवा सुचारु तथा ल्याब समेतको व्यवस्थापन डा. यादवको अगुवाईमा नै भएको हो ।
हाल यस स्वास्थ्य केन्द्रमा टेलिर्डमाटो तलोजि मार्फत छाला रोगको निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा त्रि.वि. शिक्षण असपतालका छाला रोगको विभागिय प्रमुख प्रा.डा. द्धारिका प्रसाद श्रेष्ठको सहयोग र परामर्शमा सञ्चालन भई रहेको । यसका साथै सहयोगार्थ प्राप्त औषधीहरु समेत निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ जुन औषधीहरु सामान्यत महंगोहुने गर्दछ । त्यसै गरी रेविजको निःशुल्क र्सुइ डा. यादवको अथक प्रयासबाटै उपलब्ध भएको हो । यो र्सुइ काठमाडौं जिल्लाको सर्न्दर्भमा टेकु र यस केन्द्रमा मात्र निःशुल्क उपलब्ध छ । Microscope बिग्रिदा ल्याब नै प्रभावित हुन पुगेको थियो । सम्वन्धित निकायबाट यसको समाधान हुन नसक्दा महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भिम आर्चायको सहयोगमा व्यवस्था गरिएको छ । रेविजको र्सुइ पनि डा. आर्चायकै सहयोगबाट उपलब्ध भएको हो । बैशाख महिना देखि इसीजी र भाद्रबाट एक्से सेवाक समेत सुरु भएको छ । एक्से, इसीजी र ल्याब सेवाका लागि व्यवस्थापन समितिले निधारण गरेको न्यूनतम शुल्कमात्र लाग्ने डा. यादवले बताए ।
यसका साथै निःशुल्क औषधि वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र अभाव हुन नदिन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयबाट प्राप्त हुनेमा थप औषधिहरु आपुर्ती महाशाखाबाट हे.अ. योगेश भट्टले आफ्नै पहलमा समय समयमा ल्याउने गरेका छन् ।
विगतको भन्दा आ.व. ७३/७४ मा सम्पुर्ण सूचकहरुमा प्रशंसनिय सुधार भएको छ । परिवार नियाजनका अस्थाई सम्पुर्ण सेवा सुधार गरी इमप्लान्ट, आयुसीडि, डिपो, चक्की र कण्डम सबै उपलब्ध रहेको छ । इमप्लान्ट र आयुसीडी एक वर्षआगाडीबाट सुरुगरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष १५० जनाले इमप्लान्ट सेवा लिएको स्वास्थ केन्द्रको तथ्याकं रहेको छ । परिवार नियाजनका सेवामा भएको उल्लेखनिय सुधारको फल स्वरुप जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं अन्तरगतका सबै स्वास्थ्य संस्था मध्ये टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोस्रो स्थानमा छ ।
टोखा नगरपालिका पूर्ण खोप घोषणा भईसकेको छ । आ. को व. ७३/७४ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको खोप सेवाको मुल्याङ्कणमा सो कार्यालय अन्तरगतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहिलो स्थानमा र समग्रमा पाँचौं नम्वरमा छ । पूर्ण खोपलाई दिर्घकालिन बनाउन यस स्वास्थ्य केन्द्रले पाएको उपलब्धी अवश्यक नै उपयोगि हुनेछ । मातृ शिशु सेवामा पनि व्यापक सुधार भएको देखिन्छ । अघिलो वर्षो ९.५ प्रतिशत रहेको चारपटक गर्भवती जाँच आ.व ७३/७४ मा फडको मार्दै ४७ प्रतिशतमा पुगेको छ । बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन लाई प्रभावकारी बनाउन एस. डि.पि.सि. संस्थाको सहयोगमा हरेक महिनाको पहिलो साता १ देखी ७ गतेसम्म वृद्धि अनुगमन सप्ताहको रुपमा अभियान चलाइरहेको छ । यो कार्यक्रम यसै स्वास्थ्य केन्द्रको आफ्नै कार्यक्रम रहेको जानकारि योगेश भट्टले दिए । यो अभियानको फल स्वरुप पोषणको सुचकमा दई गुणाले बृद्धि भएको हो । यी सम्पुर्ण प्रगति र सफलता यस स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारि र महिला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाहरुको अथक प्रयास र सेवाभावले हासिल भएको डा. यादवको बुझाई छ । साथै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त सहयोग र प्रोहोत्सानले पनि सधैं प्रेरित गरेको उनको भनाई छ ।
आफु कार्यारत क्षेत्रका बिरामी सेवाग्राहीहरुलाई आफुले सकेको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन चिनजान भएका संस्था र व्यक्तिहरुसंग हारगुहार गरेर भए पनि आवश्यक सेवाहरु स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याउने कार्य भईरहेको डा. यादवले भने ।
सरकारी स्वास्थ्य चौकी र केन्द्रहरुको बारेमा सामाजको पुरानो नै धारण रहेकाले सुलव र निःशुल्क रुपमा उपलब्ध सेवा सुविधाहरुको सदुपयोग गर्न मानिसहरु हिच्किच्याउने गरेको छ । जनचेतना फैलाउनको लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्प्युटरबाट स्वास्थ्य सामाग्रिको भिडियो देखाउने व्यवस्था गरियको छ । सो भिडियोहरु अत्यन्तै जानकारिमुलक र उपयोगिग रहेको सेवाग्राहिको थहर छ । सो कम्प्युटरमा ३० घण्टा जतिको भिडियो सामाग्रीहरु राखिएका छन् । स्वस्थ समाज र स्वस्थ व्यक्ति निर्माणका लागि यस स्वास्थ्य केन्द्रले विभिन्न संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै आईरहेको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवीकाहरुलाई तीनीहरुको कार्यमा सक्रिय रुपमा लाग्न प्रोत्साहान गर्ने र तीनिहरुको कार्यहरुको मुल्याकंन गरी पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । आमा समुह तथा नागरिक सचेतना केन्द्रलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसंग सिधा सर्म्पर्क गर्राई स्वास्थ्य केन्द्रले कार्यक्रमहरुमा सक्रिय गराएको छ । समय समयमा विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु समेत गरिदै आईरहेको छ । विभिन्न दिवसहरु जस्तै विश्व मुटु दिवस, मधुमेह दिवस, स्तनपान, धुम्रपान, वातावरण दिवस आदिमा विभिन्न जनचेतामूलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिदै आईरहेको छ ।
सक्षम नेतृत्व र व्यवस्थनप भएमा जस्तो कसुकै अभावमा पनि उच्चित सेवा सुविधा दिन सकिने जोल्नत उदाहरण यहिले हामीले यस स्वास्थ्य केन्द्रमा देखन सक्छौँ । स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका सबै कर्मचारिहरुलाई नेतृत्व गर्दै सेवाग्राहिहरु लाई सेवा दिदै स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै माथि उकासने कार्यमा अहिले सबै कर्मचारिहरु एक साथ अगाडी बढिरेको देखिन्छ । कर्मचारिहरुको एक अर्का प्रतिको साथ सहयोगका कारण स्वास्थ्य केन्द्रको मुहार फेरिदै आएको आभाष मिल्द छ । सामुहिक कार्यका कारण नै यस स्वास्थ्य केन्द्रले सबै सूचानकहरुमा व्यापक सुधार गर्न सफल भएको छ । छोटो समयमै प्रभावकारि सेवा स्रगै दिईएको लक्ष्यप्राप्त गर्न सफल यस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टोखामा मात्र नभई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंमा समेत चर्चामा रहेको छ ।
स्वास्थ्य केन्द्रको स्वास्थ सुविधामा आमुल सुधार गर्ने कार्यमा लागि रहन्दा विचविचमा आउने समस्याबाट यो केन्द्र पनि अछुटो छैन् । भौतिक पुर्वाधारका अभावमा पनि सेवाग्राहीलाई सेवा सुविधा दिदै आइरहेको छ । आवश्यक सामाग्री राख्न तथा ल्याव लगाएतका अन्य उपकरणहरु राख्नका लागि कोठाको अभाव रहेको छ । एक तलय भवमा रहेको छ वटा कोठालाई पाटेशन गरेर भएपनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यद्यपी केहि समयमा यो स्वास्थ्य केन्द्र गलेमा निर्माणधिन नयाँ भवनमा सर्नेछ । तर हाल भने ठाउँको अभाव रहेको छ । नाफामुखी भन्दा सेवामुखी संस्था भएका कारण सरकाले उपलब्ध गराउने गरेका बाहेकका अन्य आवश्यक थप सामाग्री तथा कार्यालय संचालन गर्न कठिन हुने गरेको छ । यसका लागि स्थानीय निकायबाट उच्च प्राथमिकता दिइ सेवा र सुविधामा सहयोग गर्नु पर्ने केन्द्रको भनाइरहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयले आफ्नो भावि योजनामा ल्याबलाई स्तरोन्ती गर्ने एनालाइजरको व्यवस्था गरी अरु थप परीक्षण/जाँच गराउने आगामी योजना स्वास्थ्य केन्द्रले लिएको छ । त्यस्तै गरी सुरक्षित गर्भपनको सेवा, मुखको क्यानसरको पहिचान सेवा तथा दन्त सेवा दिने योजना रहेको कार्यालय प्रमुख डा. यादवले जानकारी दिए ।
त्यस बाहेक मानिसहरुमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रतिको परमपरागत सोच स्वास्थ्य केन्दले अर्को ठुलो समस्याको रुपमा लिएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रले ती परम्परागत सोचलाई हटताउदै गुणस्तरिय सेवा सु्विधा दिइरहेको छ । तर मानिसहरुमा जनचेतनाको अभाव हटताउन स्वास्थ्य केन्द्रको मुल चुनौति नै हुनेछ । विद्ययमान अभाव र चुनौतिहरु लाई सामाना गर्न र प्राप्त उपलब्धिहरुलाई स्थाईत्व दिई प्रगतिको पथमा अग्रसर भईरहन यस टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थानीय निकायको सहर्षसहयोगको आवश्यकता देखिन्छ ।
सकरात्म सोच र कामका साथ अगाडी बढिरहेको परिपेक्षमा टोखा नगरपालिकाले विशेष रेखदेखमा यसलाई आवश्यक पर्ने भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गनेहो भने सामान्य उपचारका लागि अस्पताल धाईरहनु पर्ने समस्याबाट मुक्त हुनेछ । नगरस्तरबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर स्वास्थ्यको नेतृत्वदायी भूमिका बढाउने र प्रत्यक्ष सहभागी गराउने दिघकालिन नीति बनाउन सकेमा यस भेगका र्सवसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट लावान्वित हुनेछ । जन समुदायमा सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर उपचार गराउन प्रचारप्रसार गर्ने लगाएकता कार्य नगर स्तरबाट नै गरी स्वास्थ्य लाभ लिन प्रेरित गुर्नुपर्ने देखिन्छ।
सोम, सावन २१, २०७५
फास्टफूड प्याकिंग बक्स स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक,सिन्थेटिक केमिकलले हुन सक्छ क्यान्सर
शुक्र, जेठ २५, २०७५
मास हिस्टेरिया के हो ?
पानी कति पिउने र कसरी पिउने ?
शुक्र, बैशाख ७, २०७५
बुध, फागुन २३, २०७४
एड्सजस्तै खतरनाक रोग ‘हेपाटाइटिस बी’ बाट बच्ने कसरी ?
बिही, फागुन १०, २०७४